समाचार Archives - हलेसीपाटी
हाम्रो हलेसी/राम्रो हलेसी
जबर्जस्ती करणी अभियोगमा शिक्षक पक्राउ
माडी नगरपालिका–५स्थित बह्मज्योति आधारभूत निम्नमाध्यमिक विद्यालयका शिक्षक कुम्मसिंह विकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनलाई आफ्नै विद्यालयमा कक्षा ३ मा अध्ययनरत १२ वर्षीया बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । विकले बालिकालाई आर्थिक प्रलोभन देखाई विगत दुई वर्षदेखि करणी गर्दै आएको प्रहरीले जन...
प्रहरी मुख्यालयमा किन पस्यो अख्तियार ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट दुई वर्षयताका महत्वपूर्ण कागजात उठाएको एक महिना बितिसकेको छ । प्रहरीका जुत्ता, बर्दी र सवारी साधन खरीदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा परेको उजुरी यतिबेला प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेको टेबलमा छ । आखिर प्रहरी हेडक्वार्टरमा किन पस्यो त अख्तियार ? यसबारे हाम...
आँखाको दृष्टि कसरी बढाउने ?
के तपाईंलाई थाहा छ ? तपाईंको शरीरको सबैभन्दा सक्रिय मांशपेशीहरु आँखाकै हुन्छ भन्ने कुरा । साथै आँखा नै तपाईंको शरीरको सबैभन्दा सुन्दर तथा सबैभन्दा नाजुक भाग पनि हो । यहाँसम्म कि आँखाहरुलाई तपाईंको व्यक्तित्वको दर्पण समेत भन्ने गरिन्छ । यी सबै कारणहरुले गर्दा के कुरा बुझ्न अनिवार्य छैन भने तपाईंले आफ्नो आँखालाई ल...
चर्चित र्‍यापर भिटेन पक्राउ ।।
चर्चित र्‍यापर भिटेन पक्राउ परेका छन् । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीले उनलाई जाउलाखेलबाट पक्राउ गरेको हो । उनको पछिल्लो गीत ‘यस्तै त हो नि ब्रो’ निकै चर्चित भएको थियो । त्यही गीतमा भएका शब्दहरु र फेसबुकमा राखेको तस्वीरका आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको महाशाखाका प्रमुख एसएसपी सहकुल थापाले जानकारी दिए ।...
काँग्रेसले सातै प्रदेशमा प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले सातै प्रदेशमा पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । काँग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको हालै बसेको बैठकले साउन १६ गतेदेखि सातै प्रदेशका १२ स्थानमा दुईदिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । काँग्रेस...
१० वर्षीया बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा वृद्ध पक्राउ
ओखलढुंगा । बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा ओखलढुंगामा एक वृद्ध पक्राउ परेका छन् । स्थानीय १० वर्षीया एक बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा चिसङ्खुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेका ६५ वर्षीय अम्बरबहादुर मगरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । घरमा कोही नभएका बेला बालिकालाई करणी गरेको भन्दै बालिकाका आफन्तले दिएको किटानी उजुरीका आधारमा मगर...
कुवेतमा बिचल्ली परेकी महिला नेपाल फिर्ता
काठमाडौं । दलालको प्रलोभनमा परी कुवेतमा बिचल्ली परेकी महाकाली गाउँपालिका (साबिक) वडा नं ८ नुवाकोटकी अनु तामाङलाई नेपाल फर्काइएको छ । राम्रो काम लगाइदिने आसमा ६ महिनाअघि दलालको फन्दामा परी भारत हुँदै कवेत पुगेकी तामाङ आफूले शारीरिक तथा मानसिक यातना भोगिरहनुपरेको गुनासो सामाजिक सञ्जालमार्फत गरेपछि सरकारले नेपाल फि...
खोटाङकाे पहिचान हलेसी मन्दिर
गाँजा खेतीको विकल्प दिँदै जनप्रतिनिधि
अदालतको गाडीमा आगजनी
धार्मिकस्थलको त्रिवेणी हलेसी महादेव
हलेसी, स्वर्गीय आनन्द लिने पर्यटकीय गन्तव्य
भक्तजनको सुन्दर गन्तव्य हलेसी महादेव
हलेसीपाटी सञ्चार प्रालिका लागि
मोबाइल : ९८४२९७४५१९
कार्यालय : हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–७ महादेवस्थान
© 2019 Halesipati.com, All Right Reserved.